နေအိမ် » နယူး£ 10 အပိုဆုသင် Winneroo မှာ Play စေချင်သေချာတာပေါ့ဆိုရင်
သငျသညျ Winneroo မှာကစားရန်ဆန္ဒရှိသင်သေချာလား? ဒါကြောင့် အကယ်. ကျွန်တော်တို့အပေါ်ချပြီ ဖုန်းလောင်းကစားရုံ သင်တို့အဘို့အကိုအထူးဆုကြေးငွေ ဒီစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်.
ဒီလအလွန် အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းကာစီနို ကမ်းလှမ်းချက်များ!
နောက်ဆုံးရ Update ကို! ရုံထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ် & မိုဘိုင်းကာစီနိုဂိမ်းများကမ်းလှမ်းချက်များ
ဂျိမ်းစိန့်. ယောဟနျသ သငျသညျဆောင်တတ်၏အလွန်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဒီလမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်အပေါ်န်းကျင်ကမ်းလှမ်း!
bookmark ဒီစာမျက်နှာ အကောင်းဆုံးသောအဘို့ Android ပေါ်မှာကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, iPhone ကို, က Windows Phone, ဘလက်ဗယ်ရီသီး, Nokia နှင့်အများအပြားပိုပြီးလောင်းကစားရုံ slot နှစ်ခုမိုဘိုင်းအပေါ်မျှသိုက်ဆုကြေးငွေအပေးအယူ.
West Midlands မှာလည်း PocketWin Mobile နှင့် Tablet ကိုကာစီနိုသင်£5အခမဲ့ဝေငှ based. သငျသညျ£ 100 ခန့်အတွက်ပေးဆောင်နေလျှင်သင်တို့သည်လည်းပါလိမ့်မယ် ချက်ချင်းပဲ£ 200 Play!
အိတ်ကပ်ဝင်းကမိုဘိုင်းကာစီနို ဖြစ်နိုင်သည်ပတ်လည်အကောင်းဆုံး Windows နှင့်ဘလက်ခ်ဘယ်ရီမိုဘိုင်းကာစီနိုသည်. ထို့အပြင် PocketWin မိုဘိုင်းကာစီနိုဂိမ်းများလည်းအပေါ်ကစားသမားတွေနှင့်အတူတစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း iPhone ကို, အိုင်ပက်, ထိုကဲ့သို့သော Nokia ကအဖြစ်မိုဘိုင်း၏ Android နှင့်အများအပြားအဟောင်းတွေမော်ဒယ်များ, Samsung က, ထက်သော, Motorola က, HTC က စသည်တို့ကို. PocketWin ကာစီနိုလုံးဝမိုဘိုင်းငွေသားကစားသမားဒါကြောင့်အဆင်ပြေပြေနဲ့လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်ရှာတွေ့သည့်မိုဘိုင်းငွေတောင်းခံထွက် sussed ပြီ. သငျသညျမိုဘိုင်း Pocket ဝင်းအပေါ်ဂန္ထဝင်လောင်းကစားရုံစားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းကစားခြင်းချစ်ကြလျှင်ပုံမှန်ခရီးစဉ်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်သည်!
မိုဘိုင်းကာစီနိုအဖြစ်မှန်: PocketWin လည်းဖုန်းဥပဒေကြမ်းငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့် Pay ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေတုန်းဘလက်ခ်ဘယ်ရီနှင့် Windows ဖုန်းများကိုထောကျပံ့ဖို့သာကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
မိုဘိုင်းကာစီနိုအဖြစ်မှန်: Elite မိုဘိုင်းကာစီနိုမှ SMS ကိုငွေတောင်းခံနေဖြင့် BOKU ငွေပေးချေမှုနှင့် Pay ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်ရှားပါးသည် VIP မိုဘိုင်းကစားသမား
အဖြစ်မကြာမီသငျသညျကကစားတဲ့ကြောင်းကြီးတွေအနိုင်ရရှိရှာနေ punters အတွက်ဆွဲထုတ်ဖို့ပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှကြောင်းသိသာရဲ့ကြမ်းပြင်ထိအဖြစ်မည်သည့်စစ်မှန်လောင်းကစားရုံသို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်. အခါကြီးမားသောဂိမ်းများမှကြွလာ, ကြီးမားတဲ့လစာ-တနေရာ, ကြီးမားတဲ့ slot ကခေါင်းစဉ်, နှင့်ဖုန်းဥပဒေကြမ်း SMS ကိုငွေပေးချေအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့လစာ, မိုဘိုင်းဖုန်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ Stourbridge အခြေပြုထက်အများကြီးပိုကြီးမရကြဘူး mFortune.Phone ကာစီနို. မီတာ Fortune မဂ္ဂဇင်းမြေပြင်ကိုတက်မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့ကြ, နှင့်အပြည့်အဝငျသညျကိုဖုန်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ချေးငွေဒက်ဘစ်ကတ်ငွေပေးချေမှုအားဖြင့်ပေးဆောင်ရာပူဇော်သက္ကာကိုဗြိတိန်တွင်လိုင်စင်ရနေကြတယ်, PayPal နှင့်ပိုပြီးပေါင်း!
အိတ်ကပ် fruity သင်ဘယ်မှာသင်တို့အပေါ်မှာမတ်ဖုန်းကိုသငျသညျငွေသားပုရွက်ဆိတ်အဘို့ကစားနိုငျသောမိုဘိုင်းကာစီနို slot ခေါင်းစဉ်နှင့်ဂိမ်းများတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကွာအဝေးဝယ်သူရှက်ဖီးအခြေစိုက်မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံအော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ်, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်အထက်ဖုန်းကိုဟန်းဆက်. အိတ်ကပ် Fruity ဖို့အလွန်နည်းပါးမိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများပေါ်မှာ
အလွန်ရက်ရောဆက်ကပ် £ 10 ကိုအခမဲ့အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ အားလုံးပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကစားသမားတွေရန်.
အန်းဒရွိုက် slot နှစ်ခု, iPhone ကို, အိုင်ပက်, ဘလက်ခ်ဘယ်ရီနှင့် Windows မိုဘိုင်း အားလုံးချေးငွေ / Debit Card ကိုမှတဆင့်ထောက်ခံပေးချေမှုနှင့်အတူ Pocket Fruity မှာထောက်ခံနေကြတယ်, Mastercard, ဗီဇာခရက်ဒစ်, ဗီဇာမြီ, ဗီဇာ Electron, Maestro, တစ်ကိုယ်တော်, Ukash နှင့်ဖုန်းဥပဒေကြမ်း (SMS ကိုငွေတောင်းခံလွှာ) ငွေပေးချေမှု.
ဤကွီးစှာသောစောင့်ရှောက်မှုအားလုံးကစားသမားခေါ်ဆောင်ရှိရာဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တောက်ပကြားဖြစ်ကြသည်အဘယ်မှာရှိမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါသည်. Moobile HD ကိုမှာ slot ၏အမိန့်ရှိပါတယ် ကစားသမားများကြီးထွားလာအရေအတွက်နေ့က. iPhone ပေါ်မှာ Moobile အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ Play, အန်းဒရွိုက်, စမတ်ဖုန်းများနှင့် Tablet ကိုနှင့်များစွာသောအခြားမော်ဒယ်များ! နယူးကစားသမားအပိုဆုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ပေါင်း£5လုံးဝအခမဲ့£ 225 အထိ£ ယူ. စတင်ရန်.